के गर्दैछिन् अमेरिकाबाट फर्केकी चिनियाँ राष्ट्रपतिकी एक्ली छोरी - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
के गर्दैछिन् अमेरिकाबाट फर्केकी चिनियाँ राष्ट्रपतिकी एक्ली छोरी
लक्ष्मी लम्साल बेइजिङ, पुस १५
सन् १९८७ को सेप्टेम्बर १ तारिखका दिन सुटुक्क विहे बन्धनमा बाँधिनुअघि एउटा ३४ वर्षीय तन्नेरी आफूभन्दा १० वर्ष कान्छी युवतीलाई फुच्येन प्रान्तमा अनेक प्रयास गर्दै मायाजालमा पार्न खोजिरहेका थिए। साथीभाइको सहयोगमा ब्लाइण्ड डेटिङ् (अन्जान भेट) मा सामेल एक ख्यातिप्राप्त गायिकालाई नचिन्ने तन्नेरी भन्दै थिए, ‘तिमी कस्ता खालका गीत गाउँछौरु माफ गर, मैले टिभी हेर्ने गरेको छैन।’
२४ वर्षीया युवतीलाई लाग्यो, ‘आफूजस्तो चर्चित कलाकारलाई नचिन्ने कस्तो मान्छे, कस्तो अव्यावहारिक।’
४० मिनेट लामो चलाखीपूर्ण अन्तरंग कुराकानीमा संगीतका विधिहरुबारे चासो राख्दै विहे गर्ने निर्णयमा पुगेको निष्कर्षमा पुग्दै तन्नेरीले युवतीका अभिभावक मनाउने तानाबाना बुन्छन्, ‘मेरा पिता पनि किसान हुन्, मेरा भाइबहिनीले पनि सामान्य विहे गरेका हुन्। म तिम्रा अभिभावक सामु यसैगरी व्याख्या गर्नेछु र उहाँहरुले स्वीकार गर्नुहुनेछ।’
अन्ततः मायाजाल कसिएर एकापसमा लीन हुने प्रण गरेका चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ् र ख्यातिप्राप्त लोक गायिका फङ्ग लीयुआनले सन् १९९२ जुन २७ तारिखका दिन बेइजिङ्गमा एक राजकुमारीलाई जन्म दिए। नाम होः सी मिङ्च, माया गरेर बोलाउने नाम होः स्याउ मु जी।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालभरी प्रथम लेडी मिसेल सँगै उनका दुई छोरीको चर्चा भयो। कहिले रेष्टुरेण्टमा काम गरेको त कहिले गाँजा खाएको भनेर उनीहरु मिडियामा छाइरहे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका सन्तानको पनि कुरा उठ्ने गर्छ। नेपालका राष्ट्रपतिका सन्तान विदेशमा नभएपनि मुलुकभित्र भने चर्चामै रहन्छन्। कतिपय विश्वचर्चित नेताका सन्तान छैनन् भने कतिपय बाहिरी दुनियाँमा ल्याउन चाहँदैनन्।
खुलापनतर्फ लम्किँदै गरेको चीनले प्रथम महिलालाई बाहिर ल्याए झैं उत्तराधिकारी छोरीलाई पनि सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्ला कि गुपचुपमै राख्लारु सी जिनपिङ राष्ट्रपतिमा चयन भएपछि चीनमा मात्र नभएर विश्वभर नै यस्तो चासो बढेको थियो।
चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षकी एक मात्र छोरी भएकाले उनको बारेमा दुनियाँलाई चासो त हुन्छ तर आम चिनियाँलाई मात्र हैन, विश्वलाई पनि थाहा छैन कि उनी कस्ती चालढालकी छिन्। रोयटर्स, डेलीमेल लगायत पश्चिमा सञ्चारमाध्यमलाई उनीबारे थोरै सामग्री खोज्न पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ भने चिनियाँ मिडियाहरुले उनको बारेमा लेख्न सामग्री नै फेला पार्दैनन्। आखिर उनी कहाँ छिन्, के गर्दैछिन्? के उनी चिनियाँ राष्ट्रपति दम्पतीको उत्तराधिकारीका रुपमा राजनीतिमा पनि अगाडि आउलिनरु यस्ता कौतुहलता यथावत् छन्।
किताबी किरो स्याउ मु जी
अध्ययनको मामिलामा जानकारहरु भन्दछन्, उनी किताबी किरो हुन्। सन् २००६–२००८ मा स्याउ मु जीले हाङ्चौ फरेन ल्याङ्ग्वेज स्कूलमा फ्रान्सेली भाषा अध्ययन गरेकी थिइन्। उनले सन् २००९ मा चच्याङ्ग विश्वविद्यालय अन्तर्गत हाङ्गचौ फरेन ल्याङ्ग्वेज स्कूलको अङ्ग्रेजी भाषा अनुवाद विभागमा पढिन्। ख्यातिप्राप्त माध्यामिक स्कूल र विश्वविद्यालयको रुपमा परिचित यस स्कूलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी पहिला पार्टी सेक्रेटरीका रुपमा काम गर्थे। यो चीनका प्रसिद्ध र नामी विश्वविद्यालयमा पर्ने एक पुरानो शिक्षालय हो।
त्यहाँ पढ्न थालेको एक वर्षमै अर्थात् सन् २०१० मा उनी अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालयमा भर्ना भइन्। हावर्ड सन् १६३६ मा अमेरिकाको मासाचुसेट्स, क्याम्ब्रिजमा खुलेको संसारकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय मानिन्छ। केही मूल्याङ्कनकर्ताहरुका अनुसार स्याउ मु जी या त विलक्षण प्रतिभाकी धनी थिइन् या त भर्ना गर्न विशेष चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो। चच्याङ्ग विश्वविद्यालयबाट हावर्डमा भर्ना हुनु कसैका लागि पनि चानचुने कुरा होइन। द न्यूयोर्करका अनुसार सन् २०१४ मा हावर्डबाट ग्राजुयसन गरेपछि उनी चीन फर्किीकी हुन्।
छद्म नाममा हावर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत स्याउ मु जीलाई उनकै सहपाठीहरुले चिन्दैनन्। उनी खासै अरु साथीहरुका आँखामा पनि पर्दिनन्। उनी एउटा सानो समूहमा मात्रै सीमित हुन्छिन्। उनको उपस्थिति कुनै विद्यार्थी संगठन वा विभागमा त्यति ध्यानाकर्षक पनि बन्दैन। न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ– उनले मनोविज्ञान र अङ्ग्रेजी विषय अध्ययन गरेकी छन्। छद्म नाम भएकाले उनका बारेमा १० भन्दा कम सहपाठीहरुलाई मात्रै उनी को हुन् भन्ने जानकारी छ।
भाइरल बनेको लेख
कुनै पनि उच्चपदस्थ चिनियाँ नेताका सन्तति विदेश वा हावर्ड विश्वविद्यालयमा भर्ना गरिएको कुरा चासोको विषय त हुने नै भयो। बेलायती डेली मेलले उनको बारेमा समाचार तयार पार्न लामो समय खर्चिएको थियो। सीलाई चिन्ने मानिसहरुको खोजी गर्न र हावर्डमा उनको अध्ययन अवस्थाबारे पत्ता लगाउन त्यस्तो कठिन भएको थियो। यो लेख तुरुन्तै सञ्जालहरुमा भाइरल हुन गयो। लेखमा लेखिए अनुसार स्याउ मु जी किताबकी किरो हुन्। अन्तर्मुखी र अध्ययनशील केटी। उनी सातै दिन, चौबिसै घण्टा छात्रावासमा सुरक्षा पहरामा रहने गर्छिन्।
एकपटक उनी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी विषयक बहसमा रुचीपूर्वक सामेल हुँदाको एउटा लेख आकस्मिक रुपमा सार्वजनिक भयो। तत्काल चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वैबोमा छ्यास्छ्यास्ती भयो। तर चिनियाँहरुले सामाजिक सञ्जालमा फैलाउन नपाउँदै सेन्सर गरियो।
हङकङस्थित साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले जनाएअनुसार उनका १९९० को दशकमा खिचिएका तस्वीर मात्रै सार्वजनिक गरिएका छन्। त्यसैले पनि उनलाई कमै मानिसले झट्ट देख्दा ठम्याउन सक्छन्। उनी कतै घुम्दा वा साथीभाइको जमघट हुँदाका तस्वीरहरु ट्वीटर वा कुनै चिनियाँ सामाजिक सञ्जालहरुमा पोष्ट गर्दिनन्। उनको ट्वीटरमा केही दृश्यावली वा वस्तुका तस्वीरहरु कहिलेकसो पोष्ट भएको देखिन्छ।
पहिलो पटक सार्वजनिक
सन् २०१३ मा राष्ट्रपतिको कार्यालय सम्हालेपछि सी जिनपिङले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरु गरेको दुर्गम गाउँको भ्रमण गरे। पत्नी फङ् लीयुआनसँग राष्ट्रपति सीले शान्सी प्रान्तको ल्याङ्गच्याहस्थित यानान गाउँमा पुग्दा सुपुत्री स्याउ मु जीको अनुहार पहिलो पटक सार्वजनिक भयो। सन् १९७० को दशकमा सीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ताको रुपमा ६ वर्ष काम गरेको सो गाउँमा लुनार पात्रो अनुसार नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गरिएको थियो। यो नै पहिलो घटना थियो कि हावर्डमा अध्ययनरत सी पहिलो पटक देखापरिन्।
आफ्ना पिता राजनीतिज्ञ भएर मात्रै होइन, सानैदेखिको सक्रियताले सी जिनपिङ राजनीतिक वृत्तमा चिनिएकै थिए। उनकी श्रीमती फङ्ग लीयुआन पनि कलाकारको छविले आम सर्वसाधारणमा परिचित नै थिइन्। अहिले पनि यो दम्पती संसारभरि उत्तिकै चर्चामा छ। राष्ट्रपति सी जता जता जान्छन् फङ्ग लीयुआन सँगै हुन्छिन् र एक साँस्कृतिक दूत वा फेशन आइकनका रुपमा गणना गरिन्छिन्। तर छोरी स्याउ मु जी किन गुमनाम छिन् भन्ने कुरा उजागर गर्न सञ्चारजगतलाई पनि त्यति सजिलो देखिँदैन।
भविष्यमा के बन्लिन् स्याउ मु जी?
अनुभवका हिसावले सन् २००८ को विनाशकारी सिचुवान भूकम्पको उद्धारका बेला उनी सात दिन स्वयंसेविका बनिन्। एउटा चिनियाँ वेभसाइटमा २००८ को सिचुवानको वन छ्वान भूकम्पमा छोरीको योगदानबारे चर्चा गर्दै सीसीटिभीमा आमा फङ्ग लीयुआनले भनेकी थिइन्, ‘भूकम्पको केहीदिनपछि १६ वर्षीया मिङ्ग आफ्नो स्कूलमा गयल भएर भूकम्पग्रस्त सछ्वानको मियानचुस्थित हानवाङ् तोङ्छी प्राथमिक विद्यालयमा तैनाथ भइन् अनि घाइतेको उद्धार र परामर्श दिने काममा आफूलाई व्यस्त राखिन्। विनाशकारी भूकम्पपछि उनले अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने थियो, उनले धेरै कुरा सिकिन् र गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरिन्। उनलाई कुनै असहज लागेन।’
फङ्ग लीयुआनको चाहना थियो, छोरो जन्मियोस्। बाल्यकालमा पनि आफ्नो काखमा छोरीले धेरै उपद्रो गर्ने गरेको सम्झिँदै उनी भन्छिन्, ‘छोरीको अनुहार बाबुसँग मिल्छ। मसँग धेरै चकचक गर्थी। तर आफ्ना बुबाको काखमा पुगेपछि ज्ञानी हुन्थी, सानी विराली जस्ती।’
जुनियर सी अङ्ग्रेजीमा राम्रो रुची राख्छिन् र उनलाई भविष्यको कूटनीतिज्ञका रुपमा विकास गर्न सी दम्पती चाहन्छ। तर उनलाई अध्ययन र फेसनमा पनि निकै रुची छ। एउटी आमाको भावमा छोरीलाई अङ्गालेर सुत्न मन पराउने फङ्ग लियुआनभित्र छोरीका लागि पर्याप्त समय दिन नसकेको छटपटी छ। उनी चाहन्छिन्– छोरीको भविष्य सुन्दर बनोस् र समाजका लागि उनी उपयोगी चरित्र बनुन्।
फङ्ग भन्छिन्, ‘उनको अध्ययनशीलता गहन छ। अध्ययन एउटा सही मार्ग हो। यसले उनीहरुलाई भविष्यमा आफ्नै पाखुरामा केही गर्न र सामाजिक हितका लागि जुध्न सक्षम बनाउँछ। त्यसपछि भविष्यमा उनी जे बन्न चाहन्छिन् बनून्, उनको इच्छा विपरीत कुनै कुरामा जोड दिनु न्यायोचित हैन। उनी समयको प्रवाहमा बग्दै जाऊन्। या त उनी मजस्तै गायिका बन्न चाहन्छिन् भने त्यो पनि उनमै निर्भर रहने कुरा हो।’
प्रकाशित १५ पुस २०७३, शुक्रबार | 2016-12-30 14:30:03